Isisebenzi Seselula | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 2, 2011 NgoLwesibili, Septhemba 4, 2012 Douglas Karr
Ngo-2012, uMorgan Stanley ubikezela ukuthi ukuthunyelwa kwama-smartphones kuzodlula ukuthunyelwa kwamakhompyutha. Ngaphezu kwalokho, kulindeleke ukuthi ama-25% wabo bonke abathengisi be-inthanethi bakwenziwe ngomakhalekhukhwini. Sekuvele kulinganiselwa ukuthi ama-30% we-imeyili yenkampani ifundwa kuselula. Yize imithombo yezokuxhumana ibonakala ihola izindaba eziningi… iselula kufanele phezulu kwengqondo nazo zonke izinkampani.
Kepha izinkampani akufanele zimane zibheke iselula ngokubuka kokumaketha, amabhizinisi kufanele futhi akhuthaze abasebenzi bawo ukuthi bamukele. Lokhu infographic evela kuDell ikhuluma ngokusebenza kahle kweselula ngombono womsebenzi nokukhiqiza. Njengoba i-infographic isho:
Ingabe yisikhathi sokucabanga kabusha ngezinqubomgomo zakho ze-IT bese ujoyina inhlangano yezisebenzi zeselula? Izinkampani ezingakwazi ukuzivumelanisa ngokushesha ne-mobile landscape entsha maningi amathuba okuthi ziphumelele futhi zichume.
Abasebenzi abasuselwa olwazini baqhuba ibhizinisi ngokuhlala bexhumekile. Ingabe abasebenzi bakho baxhunyiwe?
Tags: infographicUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethii-infographic yeselulaisisebenzi esingumahamba nendlwana
Dala izingqikithi zeselula nge-WPtouch Pro